Donald Trump inopisa inopisa, kwete kukwana nickel - Kumadokero kwe1ère - TELES RELAY
HOME » VANHU & VANHU Donald Trump inopisa inopisa, kwete kukwana nickel - Kumadokero kwe1er
Mutungamiri weUnited States Donal Trump, uyo anorova achipisa nekutsvaira, aida vhiki ino kuti afadze zvinonetsa zvevatengesi nevashambadziri. Kudzvinyirira kwepasi pamusoro pekutengesa kwemajeri kwakaderedza zvishoma.
Languor uye kusahadzika
Mutungamiri weAmerica ave ari kuyananisa mumazuva apfuura, achitenda nokuti "Nickel inonyanya kufarira nyika ye geopolitics, hondo yezvokutengeserana pakati peUnited States neChina uye neTonald Trump's tweets inoidya"akayeuka Philippe Chalmin panguva yake yehurukuro yehupfumi Cyclops 2019 pazvinhu zvakasikwa: "Kunyange zvazvo mutengesi wenyika uri mukuderera, mitengo inodzokororazve, iyo inotorwa pasi uye hazvina kunaka kuNew Caledonia" akapedzisa mudzidzi uye munyori wenhoroondo wezvinhu (zvinhu zvakagadzirwa) zviri pamberi peparterre yevanyanzvi nevanyori venhau vezvemari.
Nokuda kwavo, vakuru vechiChinese vakaratidza kuti vakanga vasingakurumidzi kudzoka hurukuro dzekutengeserana. Izvi zvinofanira kuonekwa kuti dambudziko rekuAmerica rakasununguka rakasunungurwa musi weChishanu, ine nhamba dzakanaka dzekugara dzimba, Philadelphia manufacturing index inotsigira hutano hwehupfumi hweUnited States.
© London Metal Exchange Nickel April-May 2019
Mukuda kwemashoko akanaka, mwedzi mitatu yenhamba yekodel akawanikwa muLondon neShanghai musi weMugovera May 15, achidzoka pamusoro pe $ 12.000 per ton. Misika yacho yakataura zvakare kuti Glencore aitarisira kuti, pamagumo eAsia LME Conference (LME Asia Week), kuti kudiwa kweiickel yemotokari dzemagetsi kunosvika 400.000 tonnes mu 2025 uye 1.300.000 tonnes mu 2030. Nokuda kwe2020, Glencore yakarongedza kumusoro kwayo yakatarisa uye zvino inofungidzira kudiwa kwemasikirwo 110.000 nekwenyama 70.000 kare.
Mune ramangwana rekurumidza, Marex Spectron mutengesi ari kukurumidza kushivirira nekusimudzirwa kwematengo emusika kwenyika yesimbi. "Zvinotora nguva yakareba sei kusanganiswa ne nickel kutanga kuzviratidza? " inotsvaga muongorori Alastair Munro, akanyatsocherechedza kugadzirwa kweNew Caledonia paLME yeLondon. Musi weChishanu, vatengesi vanovhunduka kuti ruramisiro yeBrazil ingadai ichikumbira Vale kuchenesa vanhu vari pedyo nedzimwe dhamani dambudziko rekuwa, izvo zvakasimudza mutengo wesimbi. Kupikisana nedzimwe simbi, simbi yakakwira kuChina kusvika kuZ $ 98,25 pamatani, yakakwirira kupfuura anenge makore mashanu. "Pamusoro pezvinotinetsa izvi nezvehuwandu hwehupfumi hwenyika, chido chinoramba chiri chakasimba, uye chinyorwa chesimbi inobva kuChina munaApril"akadaro vaongorori ve ING.
Zvisinei, nickel rebound yakave isina kusimba. Chishanu, ruzivo kubva kune vashandi vechiChina Grand Flow Resources uye bhangi reAustralia Macquarie Research akaratidza izvozvo "Nickel cast cast iron (NPI) kuIndonesia uye China inogona kuwedzera ne 20% mu2019." Chishanu, iyi data yakasvika pakuyera pamutengo wesimbi paLME. Mukusava nehutungamiri, misika yemakemikari ndeyo "Ndisina." Manheru manheru, nickel yakachengetedza madhora e12.000 madhora.
Pamusoro peLME, nickel ton yokutora mumwedzi mitatu yaitengeserana pamadhora e12.020 musi weChishanu ku16H30 GMT, ichibva ku0,91%. Nickel pound yaikodzera madhora e5,45. Pavhiki, simbi inokwidzwa ne0,48%, pamwedzi inopera 5,04%.
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://la1ere.francetvinfo.fr/donald-trump-souffle-chaud-pas-suffisant-nickel-711631.html
Virginie Efira "pedyo kwazvo" nemwanasikana wake Ali: anotaura muhukama hwavo